Itch.io: Waa suuq furan oo loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga oo lagu taageerayo GNU / Linux | Laga soo bilaabo Linux
Isagoo sii wata mowduuca ah Ciyaaro waxtar leh, codsiyo iyo / ama barnaamijyo cayaareed oo lagu ciyaaro GNU / Linux, si loo ansixiyo loona muujiyo taas Nidaamyada Hawlgalka Bilaashka ah iyo Furfuran noqon karaa oo ahaan karaa, sida ugu wanaagsan, sida kuwa kaleba ujeeddadan, waxaan uga hadli doonnaa arrinta ah Itch.io.
Xaqiiqdii wali GNU / Linux laga yaabaa inuu ka dambeeyo Windows ama MacOS dhinacyada qaarkood, laakiin tan badanaa waxay ku timid dulsaar la'aan dhanka warshadaha qaybta farsamada ama ganacsiga, sida videogames, oo aan loo xaddidnayn farsamo ahaan tan aan ku qanacsanahay GNU / Linux ama taageero la'aan ka Beesha horumariyeyaasha ama adeegsadayaasha. Iyo inkasta, hadda Windows ku sii ahaado xukunka aan muran ka jirin aaggan, sidoo kale waa run in GNU / Linux waxay soo martay waddo dheer aaggan.
Tusaale ahaan, gudaha Laga soo bilaabo Linux inbadan ayaan kawada hadalnay Steam, mar hore waqti hore oo ku saabsan Lutris oo dhowaan ku saabsan gamehub. Hadda waa mar kale ee barnaamij kale oo weyn ciyaaraha loo yaqaan Itch.io.
Iyagoo soo xiganaya abuurayaasheeda degel rasmi ah:
"Itch.io waa suuq furan oo loogu talagalay abuurayaasha dijital ah ee madaxbannaan oo diiradda saaraya cayaaraha fiidiyowga ee madaxa bannaan. Waa madal u oggolaaneysa qof walba inuu iibiyo waxyaabaha uu abuuray. Iibiye ahaan, adigaa mas'uul ka ah sida loo sameeyo: adigu waxaad dejiso qiimaha, samee iibka iyo naqshadeynta bogaggaaga. Marnaba uma baahnid inaad hesho codad, waxyaabo ama waxyaabo la socda si waxyaabahaaga loo oggolaado, waxaadna ku samayn kartaa isbeddel habka aad u qaybiso shaqadaada sida ugu badan ee aad jeceshahay. Itch.io sidoo kale waa aruurinta qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan, xiisaha, iyo madax-bannaanida waxaad ka heli doontaa shabakadda. Annagu ma nihin dukaanka dhijitaalka ah ee caadiga ah, oo leh waxyaabo badan oo kala duwan, oo lacag iyo lacagba leh, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad fiiriso hareerahaaga oo aad aragto waxaad heshay".
1.1 Sifooyinka madal
1.2 Rakibaadda Codsiga
1.3 Screenshots Codsiga
2 Beddelka Itch.io
2.1 On GNU / Linux ama Multiplatforms
2.2 Ku saabsan Windows
Waxay siinaysaa abuurayaasha qalab ay ku gaaraan go'aanno caqli-gal ah oo ku saabsan sida loogu qaybiyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Abuurayaashu waxay marin u helaan falanqayn faahfaahsan iyo sida dadku u ogaadaan, u soo dejiyaan ama u soo saaraan wixii ay abuureen. Waxay bixisaa marin u fududaan helitaanka xogta ku saabsan culeyska ugu badan ee soo noqnoqda ama xiriiriyeyaasha soo jiita dareenka ugu badan.
Waxay u fududeyneysaa abuurayaashu inay lacag ugu ururiyaan abuuristooda qaab aan ka-hor-tag ahayn. Si kasta oo mashruucu u weyn yahay ama uu u yar yahay, howshu had iyo jeer waa mid toos ah oo loogu talagalay taageerayaasha inay ku deeqaan ama ku bixiyaan waxa ay u maleynayaan inuu xaq yahay.
Waxay dejineysaa in dhammaan iibsiyada iyo tabarucaadka lagu bixiyo wixii ka hooseeya kan ugu yar. Si kastaba ha noqotee, qiimaha ugu yar ayaa loo dhigi karaa eber (bilaash), laakiin suurtagalnimada in taageerayaasha ay dooran karaan inay taageeraan abuuraha haddii ay jecel yihiin waxa uu bixiyo.
Waxay taageertaa horay u dalbashada, iibinta abaalmarinta, sameynta waxyaabaha marin u helka hore, isku duubnaanta waxyaabahaaga, iyo xitaa ku soo ururinta yoolalka mashruuca.
Ku soo dejiso barnaamijka Linux-kaaga Degso Qeybta.
Fulinta iyada oo loo marayo Terminal (Console) ee xirmada la soo dejiyey oo ku taal Download galka, adoo adeegsanaya amarka: chmod +x Descarga/itch-setup && Descargas/itch-setup.
Sug inta ka hartay arjiga si loo soo dejiyo iyo fulinta xigta ee isku xirnaanta diiwaangelinta.
Isdiiwaangali bogga ama ku qor koontada isticmaale ee hadda.
Hadda laga bilaabo waxaan baari karnaa dhammaan baaxadda, oo iibsan karnaa / ama soo dejin karnaa cayaartooda la heli karo.
Nota: Waa muhiim in la xasuusto inay leedahay ciyaaro badan oo bilaash ah oo loogu talagalay GNU / Linux taas waa la daawan karaa, la soo dejin karaa lana ciyaari karaa iyada oo aan wax dhibaato ah, iyaga oo marin looga helo iyaga oo dooranaya calaamadda «Ciyaaraha Linux«.
On GNU / Linux ama Multiplatforms
Ku saabsan Windows
Marka la soo koobo, sidee baan u qiimeyn karnaa kuweenna Nidaamka Howlgalka GNU / Linux hadda waa gebi ahaanba ansax ah ama u qalma inuu ciyaaro, ciyaaro kala duwan tayada garaafka iyo heerarka sumcadda, inkasta oo dalabka la heli karaa aanu u weyneyn sida gudaha Windows.
Laakiin, buugga hadda jira ma aha oo keliya mid aad u ballaaran laakiin wuxuu sii wadaa inuu sii kordho maalinba maalinta ka dambeysa, ee tiro iyo tayo. Iyo halka, saamiga suuqa ee GNU / Linux aaggan, inbadan shirkado iyo horumariyayaal ayaa xiiseyn doonta barnaamijkeena wanaagsan GNU / Linux alaabtaada.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Itch.io», madal kale oo furan oo toos ah oo toos ah iyo barnaamijka ciyaaraha, kuwa ganacsiga iyo kuwa bilaashka ah, oo bilaash ah oo furan, ee GNU / Linux iyo aaladaha kale ee nidaamka qalliinka ku shaqeeya, ayaa dan iyo faa iido weyn u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Itch.io: Waa suuq furan oo loogu talagalay cayaaraha fiidiyowga oo lagu taageerayo GNU / Linux